Okokufundisa: Susa i-DRM ku-Kindle eBooks | Onke ama-eReaders
Okokufundisa: Susa i-DRM kusuka ku-Kindle eBooks
Namuhla sizothola ngalesi sifundo esilula kepha esiphelele sendlela yokususa i-DRM (Digital Rigths Management) kuzo zonke izinhlobo ze Ama-Amazon e-izincwadi.
Njengoba singahlola ku-Wikipedia i-DRM yiyona Ukuphathwa kwamalungelo edijithali (kwesinye isikhathi kubhalwa futhi ukuphathwa kwamalungelo edijithali) noma I-DRM (isifinyezo esiNgisini esithi ukuphathwa kwamalungelo edijithali) yigama elijwayelekile elibhekisa kubuchwepheshe bokulawula ukufinyelela obusetshenziswa ngabashicileli nabanikazi be-copyright ukunciphisa ukusetshenziswa kwemidiya yedijithali noma amadivayisi.
Izinyathelo eziningiliziwe zokususa i-DRM
Okokuqala kufanele silande futhi sifake uhlelo lokusebenza I-Caliber, lapho ungathola okokufundisa okubanzi kule webhusayithi efanayo, uma singenayo kakade efakwe kukhompyutha yethu
Ukulanda ukuqedwa kwamazinga okufakiwe ku- Amathuluzi Okususa i-DRM wama-eBooks
Vula ifayili olilande uma ikhompyutha yakho ingakwenzanga ngokuzenzekelayo bese ubeka ifolda endaweni ephephile ngoba kuzodingeka kakhulu ezinyathelweni ezilandelayo
Finyelela ku-Caliber bese ukhetha Izintandokazi, ngemuva Shintsha ukusebenza kweCaliber, Kuthuthukile, Izithako futhi ekugcineni Layisha i-plugin yefayela
Thola ifolda esikhulume ngayo kunombolo yephuzu 3. Ngaphakathi kwayo kufanele kube nefolda ebizwa Ama-plugins we-Caliber ukuthi kufanele sikhethe
Khetha eyokuqala yamafayela e-zip kuyo bese uyivula. Indlela yokuvula ifayela izoncika ohlelweni lokunciphisa amafayela ozowafaka
Kuzovela ibhokisi lokuphepha okufanele ulamukele ngokunikeza ifayili le- Yebo lokho kuzovela esibukweni
Chofoza ku- ukwamukela ebhokisini lengxoxo elilandelayo elizovela
Phinda le nqubo uze ungeze wonke amamojula akufolda Ama-plugins we-Caliber
Manje kufanele silungiselele ifayela le- Imodi ye-Kindle neMobipocket DRM (0. 4. 5) kusuka kusikrini se-Plugins. Kufanele sifake inombolo ye-serial yemodeli yethu ye-Kindle, ngaphandle kwezikhala, amakhonco noma enye into
Qhafaza Faka isicelo bese uvale
Manje kufanele silande ifayela le- Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon Kindle ikhompyutha uma singenayo vele efakiwe njengoba kufanele kube yinto ejwayelekile
Uma sesingaphakathi kohlelo lokusebenza kufanele sikhethe kukholamu yesobunxele, okuqukethwe okugciniwe, lapho zonke izincwadi esizithengile ku-Amazon kufanele zivele khona. Qhafaza kabili kuzo zonke izincwadi ofuna ukuzilanda
Lapho usulande zonke izincwadi ze-elektroniki ozifunayo noma zonke ofuna ukuzihlola, buyela ku-Caliber bese ukhetha inketho; Faka izincwadi ezivela ezinkomba, kufaka phakathi imikhombandlela engezansi
Manje kufanele sibe nazo zonke izincwadi ezingenama-DRM kumtapo wezincwadi wethu. Uma ngabe ubukade ungenise izincwadi phambilini, kuzofanele uphinde uzingenise ukuze ungazivikele
Sicela wazi ukuthi ukususa i-DRM ezincwadini kwephula imigomo yokusetshenziswa kwe-akhawunti yakho ye-Amazon futhi esingenacala kuyo. Konke okwenzayo ngalesi sifundo kuzoba engcupheni yakho.
Imininingwane engaphezulu - I-Retro iPad namacala we-Kindle
Umthombo - Wikipedia
Landa - I-Caliber Amathuluzi Okususa i-DRM wama-eBooks I-Amazon Kindle App
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Amazon Kindle » Okokufundisa: Susa i-DRM kusuka ku-Kindle eBooks
UDaniel Soler kusho
I-DRM yakhelwe ukuze amalungelo we-copyright angaphulwa. Kepha, ngayo, awucabangi ngamalungelo womsebenzisi othole incwadi, futhi ofuna, ngokwesibonelo, ukuyifunda kwenye idivayisi.
Kunjengokungathi uthenga incwadi, eyenziwe ngephepha, futhi ungayifunda kuphela ekhaya, futhi awukwazi ukuyikhipha kuyo. Ngokususa lowo mkhawulo (DRM), ungakhipha incwadi uhambe nayo lapho uthanda khona.
Akuyona yonke into ewubugebengu.
Phendula uDaniel Soler
Sawubona, ngilandele zonke izinyathelo kepha ngabambeka ephuzwini le-10. Angazi ukuthi ngingalungiselela kanjani i-kindle leyo. Unganginika incazelo elula yokuqeda yonke inqubo ???, Ngiyabonga.
Sawubona, ngiyabonga kakhulu ngolwazi. Ngibambeke ephuzwini leshumi ngoba kokugcwaliswayo angiyiboni indlela yokubeka inombolo ye-serial ngakolunye uhlangothi engingenayo selokhu ngisebenzisa uhlelo lokusebenza lwamahhala lwe-ipad, hhayi i-kindel enenombolo ye-serial. .
Inombolo ye-serial ivame ukuphrintwa noma ibhalwe kudivayisi uqobo.
Ngiyabonga kakhulu ngomnikelo. Kusebenze ngokuphelele! Ngivumelana noDaniel Soler, ngiyikhokhele le ncwadi futhi kungibiza kakhulu ukufunda kwikhompyutha. Ngidinga izahluko ezimbalwa kuphela futhi ngiphoqeleka ukuthi ngisebenze ngokungakhululekile. Ngithanda ukubhala amanothi ezinhlangothini zeshidi futhi, yize ngikwazi ukuphawula amazwana, akufani.
Ngiyabonga futhi kakhulu ngomnikelo!
Ngizama ukwenza lokhu ukudlulisa incwadi ethengwe kusuka ku-amazon iye kumfundi ofunda umkhiqizo ohlukile.
Ngisebenzisa iLinux futhi ayikho indlela yokukwenza. Konke kwehla (ngicabanga ekugcineni) ukuthola inombolo ye-serial ephathekayo ukuze ngikwazi ukuyenza ku-linux kepha inkinga ukuthi anginayo i-kindle ereader. Kungenziwa kanjani? Ngiyabonga.
Nazi izindlela ezilula zokususa i-DRM yabasebenzisi be-Apple
Phatha amaqoqo wakho wezincwadi ze-Kindle kalula nge-Kindlean
Ukuqhathanisa: I-Sony PRS-T1 Vs Sony PRS-T2